Imidlalo kunye nokusetyenziswa kwabantwana ukukhulisa ubuchule ebantwaneni | Oomama Namhlanje
Imidlalo kunye nokusetyenziswa kwabantwana ukuba baphuhlise ubuchule bokwenza izinto
UMaria Jose Almiron | | ekufundeni
Ukuba inye into ubhubhane ayicacisile, kukuba imfundo ifuna inguquko kwezobuchwephesha. Nangona kude kube lelo xesha ezinye izikhombisi zalumkisa malunga nesidingo sokwenza isikolo sibe setekhnoloji ethe kratya, ambalwa amaziko aphumeze isicwangciso sokwenyani. Kodwa yonke into yatshintsha ukusuka kunyaka omnye ukuya kule nxalenye. I-covid yaphazamisa ubomi bemihla ngemihla yaze yabujongela phantsi imilenze apho imfundo yemveli yayiphumele kuyo. Kwaye ke izikolo zifumene ezingenakubalwa imidlalo yabantwana kunye nokusetyenziswa ukuphucula ubuchule nokufunda.
Kucacile ukuba ukuphuculwa kwetekhnoloji kuzise inguquko kumagumbi okufundela, into esingayaziyo kukuba le nkqubo izakukhawulezisa phambi kokuba sisondele esi sikolo sitsha, esenzeka ngaphandle nangaphandle kweminyango ngaxeshanye. Inkqubo ye- izixhobo zedijithali zibe sisixhobo esibalulekileyo yolwazi. Namhlanje ukudityaniswa kuyinto eyimfuneko kootitshala nakubafundi. Kwilizwe eliguqule imithetho yalo yokuhlalisana ngenxa yokoyika intsholongwane, imfundo kuye kwafuneka ihlengahlengise.
1 Ukufunda kwidijithali
2 Iinkqubo zokudala zabantwana
Yintoni elungileyo ngolu tshintsho? Umoya wohlaziyo othembisa ngokudlala ngakumbi kunye nokufunda okwangoku, apho izixhobo ezinikezelwa yitekhnoloji zisetyenziselwa ukufezekisa ukufunda okungcono. Izakhono zedijithali ziyimeko esisiseko kula maxesha kwaye yiyo loo nto isikolo sinoxanduva lokufundisa ukuba zisetyenziswa njani izixhobo ezahlukeneyo ukuzisebenzisa zonke izibonelelo zazo.
Ingqondo yaziwa ngokufunda ngcono xa inomdla kwaye inemincili malunga noko ikufundayo. Umntwana onomdla kulo msebenzi, onwabele inkqubo yokufunda, uya kuba ngumfundi ofuna ukwandisa ulwazi lwabo, mhlawumbi kuba nokufakwa komxholo kwenzeka ngokwendalo. Inkqubo ye- imidlalo kunye nokusetyenziswa ukuphucula ubuchule kunye nokufunda kubalulekile ukuze kufikelelwe ingqalelo. Xa umntwana ehleka kwaye abe nexesha elimnandi ngelixa efunda iikhonsepthi, zilungiswe kakuhle.
Kule meko, amava okufunda aba sisondlo ngakumbi kwaye asebenze. Abantwana bafumana ulwazi olutsha ngelixa bephucula ulungelelwaniso kunye nezakhono zemoto ngokusebenzisa isixhobo. Kwelinye icala, basebenzisa ithuba lokufunda ukuba baqhubele phambili ngezixhobo zedijithali, baphuhlise ingcinga kunye nokuzifundela. Izixhobo zedijithali ziququzelela uphando, ukufunda ngokudlala kunye nomsebenzi wokubambisana, ngakumbi ukuba wenziwa kwiindawo ezilungeleleneyo zedijithali, ezinje ngeFlipped Classroom, amagumbi okufundela asebenzisanayo apho ukufunda sisiphumo sohambo olujikelezayo phakathi kotitshala nabafundi.
Iinkqubo zokudala zabantwana
Imizekelo mininzi. Xa umntwana onwabile ufunda ngcono. Jonga kwaye uhlalutye umntwana ngelixa udlala umdlalo wezemfundo, ngelixa ufunda iileta okanye usenza izibalo zezibalo kwi-intanethi. Uya kubona umnqweno wabo wokuqhubeka nokuphucula. Kukho izixhobo ezininzi kwaye izicelo zokuphuhlisa ubuchule kunye nokufunda ebantwaneni. Unokuphanda kwaye ufumane iindlela ezingapheliyo.
Eyona inomdla kakhulu yi-Mindmeister, isixhobo esikwi-Intanethi esikuvumela ukuba uyile iimephu zoluvo ngokusebenzisa uyilo kunye nenketho yobuqu. Le app inikezela ngeetemplate ezahlukeneyo zoyilo ezahlukeneyo kunye nokubanakho kokongeza amakhonkco, amagqabantshintshi kunye nee-emojis. Ukulandela umgca wobuchule, ungazama i-Canva, enye ye izicelo zokuphuhlisa ubuchule ebantwaneni. Yinkqubo enomdla ekuvumela ukuba wenze zonke iintlobo zoyilo kwaye ikuvumela ukuba wenze iividiyo ngenkcazo.
Inkqubo yesola yabantwana: baya kufunda ngelixa bonwabile!
I-Quiver-app ye-3D Coloring sisixhobo esitsha kuba ukongeza ekuvumela ukuba upeyinte kwi-intanethi, yongeza into entsha yokwenyani, ukuze ubugcisa bube bobomi ngemizobo ehambayo kwaye ijongeke iyinyani. Ilungele ukuphuhlisa ubugcisa esikolweni. KwiSmile kunye nokuFunda uyakufumana imidlalo yokuphuhlisa ubuchule ebantwaneni abaphakathi kweminyaka emi-2 ukuya kweli-10 ubudala. Ilayibrari yedijithali eyilelwe ngee-pedagogues ezibandakanya ukuhlangana kunye namabali, kunye nenkqubo yovavanyo ngobukrelekrele obuninzi.
I-Smartick, iGeogebra kunye ne-IXL zizinto ezintathu izicelo zokuphuhlisa ubuchule ebantwaneni kwaye ijolise kwimathematics. Ngabo, baya kufunda ukongeza, ii-equations kunye nokusebenza kwemathematics ngendlela emnandi nenoveli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Phuhliso » ekufundeni » Imidlalo kunye nokusetyenziswa kwabantwana ukuba baphuhlise ubuchule bokwenza izinto
Ukubaluleka kokukhathalela ubuni bakho njengomama
Iingcebiso malunga nefuthe elifanelekileyo kulutsha